मल नपाएर हैरान हुनुहुन्छ? हेर्नुस,कहिले आइपुग्छ मल – Interview Nepal
मल नपाएर हैरान हुनुहुन्छ? हेर्नुस,कहिले आइपुग्छ मल
काठमाण्डौं, पुष १२।
बङ्गलादेशबाट खरिद गरिएको ५० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल पुस अन्तिम साता नेपाल आइपुग्ने भएको छ । यही पुस २ गते सरकार–सरकारबीच जीटुजी मार्फत रासायनिक मल खरिदको सम्झौता भएको थियो ।
Posted in आर्थिक, मुख्य समाचार, समाज
Tagged रासायनिक मल